Visa Card ကိုရန်ပုံငွေရှာခြင်းအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး | အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး Demo အကောင့် - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
Visa Card ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့
ဧပြီလ 23, 2018
သငျသညျလက်ရှိသရုပ်ပြအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကို အသုံးပြု. အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နှင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ကုန်သွယ်အကောင့်ဗီဇာကတ်ကိုဖွင့်လှစ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါသည်
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ Visa Card ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ပိုက်ဆံငွေသွင်းသလဲ? အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာ
1 ။ သင့်ရဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကို Log (ငါသည်သင်တို့တစ်သရုပ်ပြအကောင့်အသုံးပြုနေသည်ယူဆတာပါ) ။ သင်တစ်ဦး OlympTrade သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်လှစ်မပေးပါဘူးဆိုရငျ, ကဒီမှာ click နဲ့အတူကုန်သွယ်မှု $ 10000 ရ။
2 ။ ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ထဲမှာ, သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာ button ကို '' တစ်ဦးအပ်ငွေ Make '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
3 ။ ပြီးတာနဲ့ငွေပေးချေမှုစာမျက်နှာ redirected သည် '' ဗီဇာအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ /Mastercardဘဏ်ကဒ်များ tab အောက်မှာ '' အမှတ်တံဆိပ်။
4 ။ သငျသညျသှေရန်ဆန္ဒရှိပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျသှေချင်သောငွေပမာဏကိုတစ်ဦးဆုကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်စေခြင်းငှါသတိပြုပါ။ သင်ကဆုကြေးရရန်သို့မဟုတ်မရှိမရှိရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထိပ်ဖျား: ဆုကြေးငွေကိုသင်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေနှင့်အတူအရောင်းအထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုသည်။ သငျသညျအရောင်းတစ်အချို့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရောက်နေပြီသည်အထိသို့သော်သင်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုထုတ်ယူလို့မရပါဘူး။
ထိပ်ဖျား: အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးတစ်ဦး '' ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကဒ် '' option ကိုပေးပါသည်။ ဒီ option ကိုစစ်ဆေးခြင်း OlympTrade သူတို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ၌သင်တို့၏ Card details စကယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
5 ။ စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိ '' သိုက် 'ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါက cardpay ငွေပေးချေမှုစာမျက်နှာရန်သင့်အား redirect ပါလိမ့်မယ်။
6 ။ သင့်ရဲ့ဗီဇာကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အမည်များ, ကဒ်နံပါတ်, တရားဝင်မှုကာလနှင့် CCV အရေအတွက်ကိုပါဝင်သည်။ '' လစာ '' ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
မိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, သင့် OlympTrade အကောင့်သင်ရုံသင့်ရဲ့ Visa Card ကို အသုံးပြု. ငွေင့်ပမာဏကိုရောင်ပြန်ဟပ်သင့်ပါတယ်။
Tags: အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးသိုက်အောင်ဘယ်လို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ရဲ့ login, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်စိစစ်အတည်ပြု, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသရုပ်ပြအကောင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသိုက် option ကို, ငွေသွင်းဖို့ဘယ်လိုကုန်သွယ်မှုအိုလံပစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်အကောင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာနည်းလမ်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ဝေမျှမယ် Post ကို